Wakazvimiririra mushandirwi: zvazviri, zvinodiwa uye maitiro ekuzvigadzirisa Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | | Basa
Zviri kuramba zvichiwanzoitika kumakambani kubhadhara vashoma uye kusarudza vanozvimiririra vashandi kuchengetedza pamubhadharo wemushandi, zororo, kuremara kwechinguva, zororo ... Zvinozivikanwa kune vese kuti munhu anozvishandira haana kana cheizvozvo. nekuti inobata zvakananga hupfumi hwavo. Asi, izvo iwe zvausingazive ndezvekuti sewe freelancer nhengo yemhuri yako anogona kuve mushandi wekuzvimiririra.
Zvino, Chii chinonzi freelance mushandi? Ndezvipi zvaunoda? Zvingaitwe sei? Tinokutsanangurira zvese.
1 Chii chinonzi wega wekushandira pamwe
2 Ndezvipi zvinodiwa kuti uve mushandi anoshanda akazvimirira
3 Ndezvipi zvakanaka zvazvinazvo
4 Maitiro ekunyoresa sevashandisi vanozvimiririra
4.1 Izvo izvo "remangwana" rinozvishandira mushandi rinofanira kuita
4.2 Anobata anofanira kuitei
Chii chinonzi wega wekushandira pamwe
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva nezve mushandi wekuzvimiririra ndizvo zvavanoreva neshoko iri. Kunyanya, tiri kutaura nezvemunhu ane hukama nemunhu anozvishandira, hama inogara uye inoshanda naye kumubatsira mubhizinesi.
Zvechokwadi, Inofanira kunge iine chekuita neyechipiri degree rekudyidzana kana kugamuchirwa. Izvi zvinoreva kuti mushandi anozvishandira anogona kunge ari mudiwa, mwanakomana, muzukuru, mukoma, sekuru, mukuwasha, tezvara, nezvimwe.
Chaizvoizvo, ihybridid ​​yemunhu anozvishandira nekuti kune zvese zvinangwa uye munhu uyu anozobvisiswa mutero semunhu anoshandirwa kunyangwe ivo vachizonyoreswa sevanozvishandira (uye nekudaro vachatofanira kubhadhara mari yacho).
Ndezvipi zvinodiwa kuti uve mushandi anoshanda akazvimirira
Kunyangwe isu tisati tatsvaira zvimwe zvezvisungo zvinodiwa, tiri kuzozviputsa zvese sezvo paine akati wandei:
Iva hama yemuridzi anozvishandira. Sezvatakambotaura, kusvika padanho repiri rekusunganidzwa kana kugamuchirwa.
Rarama mumhuri imwechete uye uve wakazvimirira pane anozvishandira muridzi. Mune mamwe mazwi, nhengo yemhuri haigoni kuzvimiririra pasina raramo yavo kubva kubasa ravanoshanda nemunhu anozvishandira.
Ita basa renguva nenguva, kwete kamwe chete.
Kwete kuva pasi pemakore gumi nematanhatu. Muchokwadi, kusvika 2020 pakange paine muganho pazera (yakakwira yekuhaya) asi izvi zvakabviswa uye ikozvino vanozvimiririra vanobatsirana ve30, 40, 50 kana 60 vanogona kubhadharwa pasina dambudziko.
Kuti vese vari vaviri vakanyoreswa muRegime yeVanozvishandira Vashandi (RETA) uye vari kubatsira mwedzi nemwedzi. Muchokwadi, kusahadzika kungamuka kwekuti iye anoshanda anozvishandira munhu anofanirwa kuve achizvishandira kekutanga kana anotenderwa kunyoresa kunyangwe anga ave makore kubvira pavakaita saizvozvo kekutanga (pano iwe unenge uine kuenda kuSocial Security kuti uone chiyero pamwe nekududzira ichi chinodiwa). Mune mamwe mazwi, hazvinyatso kuzivikanwa kana chimwe chezvinodiwa ndechekuti hama haina kumbobvira yakazvimiririra kare; kana kuti pane nguva yaasina kuzvitonga.
Kwete kunyoreswa semushandi. Ndokunge, kana munhu anoshanda akazvimiririra ainewo basa semushandi, izvi zvinovaremedza kuti vakwanise kuve mubatsiri. Uye, ikozvino, mutemo haugadzike zviitiko zvakawandisa zvemhando iyi yemamiriro.
Ndezvipi zvakanaka zvazvinazvo
Kunyangwe hazvo nhamba iyi isinganyatso kuzivikanwa, chokwadi ndechekuti ine mabhonasi mazhinji. Semuenzaniso, yekutanga, uye pamwe inonyanya kurova, inyaya yekuti kune 50% dhisikaundi pamubhadharo wakasununguka kwemwedzi gumi nemasere, sekureba sekunge munhu mutsva anozvishandira. Uye kune inotevera 18 iyo bhonasi ichave iri 6%.
Mukuwedzera, zvichave kuregererwa kuendesa kota yeVAT uye wega mutero wemitero, uye zvese zvaunofanirwa kuita kuripo mutero wemubhadharo.
Zvino pane chinhu chimwe chisina kunaka. Uye ndezvekuti iro boka harigone kuwana yakatsetseka chiyero che50 euros, sevamwe vatsva vanozvishandira vane sarudzo.
Kune munhu anozvishandira, unogona kufunga kuti hapana zvakwakanakira, nekuti ivo vanofanirwa kubhadhara chikamu chavo uye chehama iyoyo, pamusoro pemubhadharo. Asi iwe unofanirwa kuziva izvozvo muhoro unozozo nyorwa semari dzinobviswa pamitero inodzoka, chinova chinhu chakanaka kwavari.
Asi hazviperere ipapo. Iwe zvakare uchave ne bhizinesi mubhadharo bhonasi yezvinoitika zvinoitika kwemwedzi gumi nemaviri chero chiri chibvumirano chechigarire. Uye sei kuzviita izvozvo? Zvakanaka, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti mushandi anozvishandira haana kumbobhadharwa kare pasi pechiyero ichi (mukati memakore mashanu). Zvino, iyi mamiriro inofanirwa kuchengetwa kweinenge mwedzi mitanhatu, uye nzira chete yekuipedza ingave iri:
Kurega basa kwemushandi.
Kuzadzikiswa kwebasa, sevhisi kana chirongwa.
Maitiro ekunyoresa sevashandisi vanozvimiririra
Kana mushure mezvese zvatave kutaura nezvazvo, iwe uchifunga kuti nhamba iyi ndeimwe yeakanakira yako chaiyo kesi, iwe unofanirwa kuziva kuti maitiro ekuzviita acho ari, ari nyore kwazvo kuita. Ehezve, vese vanozvishandira muridzi uye uyo anozove anozvishandira mushandirwi anofanirwa kuzviita.
Izvo izvo "remangwana" rinozvishandira mushandi rinofanira kuita
Hapana. Saka, pasina imwezve ado. Iye munhu anozove anoshanda akazvimiririra haafanire kuita chero chinhu. Iwe haufanire kunyoresa neRETA, kana neRevenue Agency.
Zvese izvi zvinowira kune anozvishandira muridzi iye ndiye anofanirwa kuita maitiro, asi isu tinokuudza kare kuti zviri nyore kwazvo uye zvinoitwa mumaminetsi.
Anobata anofanira kuitei
Iye zvino ngatitaurei nezvemuridzi, iye munhu "anoshandira" neimwe nhengo yemhuri yake. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kupa iyo mhando TA0521 / 2, kungave mumunhu kuSocial Security manejimendi kana kuita iyi mharidzo online kuburikidza newebhusaiti yavo.
Mune ino gwaro, izvo zvinoitwa kuzivisa Social Security kuti pane shanduko, izvo zvingave kutora anozvishandira mushandi. Kuti uite izvi, iwe unozoda zvinotevera:
Chitupa chehama iyoyo.
Kunyoresa kwako neHaimari (semuridzi).
Hapana chimwe chinhu, kana maitiro aya aunzwa, nhengo yemhuri yako inenge yatotorwa semubatsiri anozvimiririra uye iwe unofanirwa kubhadhara mari yeichi (nebhonasi iriko, hongu) pamusoro pemubhadharo. Uye hongu, zvakakosha kuti iwe umupe mubhadharo mwedzi nemwedzi sezvo magwaro aya achizodiwa gare gare kuti aite chirevo chemari yegore negore.
Iye zvino zvaunoziva chimiro cheuyo anozvishandira mushandirwi, unochiona chiri chinoshanda mune ako mamiriro? Tizivise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Wakazvimiririra mushandi
Pension chirongwa: inoshanda sei